ओली दम्भको पहिलो धक्का पत्रकार महासंघको निर्वाचन : नेपाल : RajdhaniDaily.com -
सुरज श्रेष्ठ - February 9, 2021 0
सुरज श्रेष्ठ - February 8, 2021 0
सुरज श्रेष्ठ - January 28, 2021 0
सुरज श्रेष्ठ - January 26, 2021 0
Home प्रमुख ओली दम्भको पहिलो धक्का पत्रकार महासंघको निर्वाचन : नेपाल
काभ्रेपलाञ्चोक । ओली दम्भको पहिलो धक्का पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा पाएको एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बताएका छन् । नेपाल पक्षीय नेता कार्यकर्तालाई लक्षित गर्दै बनेपामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले ओली दम्भको पहिलो धक्का पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा पाएको नेपालले दाबी गरेका छन् ।
उनले भने, ‘नेपाल पत्रकार महासंघकोे चुनावमा, हाम्रो गठबन्धनले जित्यो । माधव नेपालका एक/एक मान्छेलाई धक्का दिइनेछ, एउटा सिटमा ल्याउन दिइने छैन भनेपछि ११ वटा संगठन एकातिर, केपी ओलीको सानो गुट एकातिर भएपछि केन्द्रीय कमिटीमा केपी ओलीका मान्छे टर्च बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति बन्यो ।’
दम्भ र निरंकुश शैली त्यागेर जेठ २ गतेको स्थितिमा फर्कन आग्रह गर्दै मिलेर जान तयार भएको नेपालले बताए । ‘हामी व्यक्तिसँग विरोध गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको विरोध गरेका हौं ।’ उनले भने ओलीलाई हटाउन चाहेको हैन, अझै २ वर्ष नेतृत्व गर्न दिने तर यस्तो धुन्धकारी निर्णय गर्दै नदिने उनले बताए । ओलीको अराजकता र निरंकुश शैलीको विरोध गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताइन्् । अधिकांश समय ओलीको आलोचनामा खर्चेका नेता नेपालले उनलाई झुटको पुलिन्दा, अराजकताको पर्याय र ध्वंसका बाहक भएको उनले आरोप लगाए ।
कर्णालीको फ्लोर क्रसको सन्दर्भमा ‘कर्णालीमा मै हुँ प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री म बन्दैछु, मैले भनेको आदेश नमान्ने हो भने सबैको राजनीतिक भविष्य सिध्याइदिन्छु भनेपछि, ‘मर्ता क्या नै कर्ता’ भनेजस्तो उसैलाई सिध्याइदिएको नेपालको भनाई थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा ‘फ्लोर क्रस’ गरी एमालेका ४ सांसदले मतदान गरेका थिए । अन्य प्रदेशमा के हुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा भने नेता नेपालले ‘आफूले त्यसबारेमा बुझ्न नपाएको’ प्रतिक्रिया दिए । कार्यक्रममा सहभागी एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्सालले भने ओलीको यही शैली रहे वाग्मतीका साथै अन्य प्रदेशमा पनि ‘फ्लोर क्रस’ हुने बताएका थिए ।
भनिन्छ, ‘मातृदेवो भव’ आमालाई देवता समान मान । यस उक्तिको सन्दर्भ मातातीर्थ औंसीमा गाँसिएको छ । यसरी आमाको महत्व र गरिमालाई प्रकाश पार्दै नेपालमा...
काठमाडाैंले पैसा त दिएन, ज्यान लियाे
काठमाडौं । भनिन्छ नेपाल एक कृषि प्रधान देश । विडम्बना ! कृषि प्रधान मुलुकमा किसानहरु श्रमको ज्याला लिन आन्दोलन गर्न विवस छन् । आन्दोलनकै...
जनतालाई दुःख दिने औचित्यहीन बन्द
बिचार सुरज श्रेष्ठ - February 5, 2021 0
नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिको विरोधमा बिहीबार गरेको नेपाल बन्दले सबैभन्दा बढी दुःख र सास्ती सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुप¥यो । सामान्य...
पहिराले पुरिएर हजुरआमा र नातिनीको मृत्यु
प्रदेश ४ सुरज श्रेष्ठ - July 20, 2020 0
दमौली । तनहुँको भानु नगरपालिका–९ सिमलगैह्रामा आज पहिराले घर पुरिँदा हजुरआमा र नातिनीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ८० वर्षीया तिलमाया धौराली र...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - May 4, 2021 0
चितुवा आक्रमणबाट बालिकाको मृत्यु
Uncategorized सुरज श्रेष्ठ - February 8, 2020 0
पोखरा । तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालबालिकाको मृत्युको घटना सेलाउन नपाउँदै पोखरामा पनि चितुवा आक्रमणबाट एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । आक्रमणमा ज्यान...
Editor-Picks सुरज श्रेष्ठ - November 9, 2020 0
सीडीओसहित ४४ सहसचिव र उपसचिवको सरुवा, को कहाँ ?
Exclusive सुरज श्रेष्ठ - June 1, 2020 0
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)सहित ४४ सहसचिव र उपसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । गृहले सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी...
Editor-Picks दीपक ओली - May 1, 2021 0
वैशाखभित्र नतिजा प्रकाशित गर्न पोखरा महानगरपालिकाको निर्देशन
भर्खरै सुरज श्रेष्ठ - May 8, 2020 0
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले नगरका सबै विद्यालयलाई वैशाखभित्रै वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशनका लागि निर्देशन दिएको छ । गत वर्षको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नहुँदा विद्यार्थी...
एनसेल अफर : १७ रूपैयाँमा ६० मिनेट कुरा गर्न पाइने
सूचना प्रविधि सुरज श्रेष्ठ - December 4, 2020 0
काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि २ वटा नयाँ भ्वाइस प्याक ल्याएको छ । यसअन्तर्गत ग्राहकले अझै सुलभ दरमा आफ्ना साथीभाइ...
आजको आवाज: परिष्कृत लोकतन्त्र
बिचार सुरज श्रेष्ठ - October 13, 2020 0
महात्मा गान्धीले भनेका छन्, ‘सुरुमा उनीहरूले तिमीलाई ध्यान दिने छैनन् । फेरि उनीहरू तिमीमाथि हाँस्नेछन् । फेरि उनीहरू तिमीसँग लड्नेछन् । अनि त्यसपछि तिमी...
प्राण माग्नका लागि कारखाना धाउनेहरु (फोटोफिचर)
सत्यन श्रेष्ठ - May 9, 2021
सुरज श्रेष्ठ - March 5, 2020
सुरज श्रेष्ठ - December 19, 2019
सुरज श्रेष्ठ - December 18, 2019